Mampihatra mpanamboatra hoditra, mpamatsy - China Practice Pabrikan'ny hoditra
Silipo malefaka fiofanana lehibe ho an'ny vatana Kanto vita amin'ny artifisialy malemy
Tena siligao, malefaka ary mora loko, hatevin'ny 0.3cm, famaritana: firafitra malefaka, volon-koditra, fitaovana tsara ho an'ny vao manomboka. Manahaka ny endrika mampiavaka ny hoditry ny olombelona, ​​vita amin'ny fitaovana manokana izay akaiky indrindra ny volon'olombelona, ​​ary ny endriny dia malefaka sy matevina manakaiky ny hoditry ny olombelona. Izy io no fitaovana fampiasa tsara indrindra ho an'ny vao manomboka alohan'ny tena fandidiana. (Nilaza ny mpianatra sasany fa mora maloto ilay hoditra fanao. Ity misy fomba tsara iray ho anao, i ...
39.5 * 30 * 0.3CM A3 habe vita amin'ny hoditra vita amin'ny volo vita amin'ny hoditra ho an'ny makiazy maharitra hoditra malefaka vita amin'ny silika vita amin'ny silika.
1.Quantity: 1pcs 2.Ny fitaovana ara-tsiranoka misy kilasy ara-tsakafo 3.Mifanaraka sy mitovy amin'ny hoditry ny olombelona, ​​matevina ho an'ny fampiasana roa-lafiny 4.Foloko malalaka sy lamina famindrana, io no hoditra fanao tsara indrindra hampiasan'ny vao manomboka. Famaritana: Fitaovana: Dimim-bolo vita amin'ny hoditra vita amin'ny artifisialy: 395 * 300 * 3MM Fonosina ao anatiny: 1 x Fanazarana tatoazy Filazalazana ny hoditra hoditra vita amina tatoazy voafintina sy voafintina izay mitazona ranomainty ary azo soloina lamba na lamba famaohana hanala ranomainty be loatra! Inona ny hevitra ...
20cm * 30cm hoditra fanazaran-tena mahamenatra ho an'ny tatoazy maharitra Microblading
Hoditra tsy manahirana hoditra ho an'ny makiazy maharitra Microblading Tattoo Tool Accessory Synthetic Skin Feature: 1.Ny tattoo dia mampihatra ny hoditra tsy misy loto ary fahatsapana mikasika hoditra tsara kokoa. 2.Plain ho an'ny fanazaran-tena amin'ny tattoo freestyle, dia manampy anao hianatra hanao asa tattoo avo lenta. 3. Mampihatra teknika isan-karazany, manomboka amin'ny famolavolana ka hatramin'ny alokaloka. 5. Mety amin'ny famonosana ny sandry na ny tongotra ary apetaho amin'ny tratra na ny lamosina ...
3D tarehy loha loha 3D Microblading makiazy molotra maharitra volomaso fanao fanazaran-tena Mannequin hoditra tarehy tarehy loha
3D Mannequin Head Face Permanent Makeup Practice Skin Ampidiro ao: (Maso 2Pcs, molotra 1Pcs, maodely 1 loha) * Set 1 Tena ilaina ho an'ny vao manomboka mianatra makiazy maharitra. 1. Manasongadina hoditra fanazaran-tena maharitra toy ny fiainana 2. Ny maso sy ny vava azo ovaina mora ampiasaina matetika 3. Ny faritry ny sisin-tsoratry ny mason'ny maso koa dia mandrakotra ny volon'ny volomaso 4. Fampidirana fanampiny amidy misaraka Ity vokatra ity dia ampiasaina ho an'ireo mianatra makiazy maharitra. Tena ilaina ho an'ny vao manomboka. Azonao atao ny manova ny maso sy mou ...
20 x 15cm Tattoo tsy misy fangarony Tattoo momba ny hoditra
Vita avy amin'ny hoditra vita amin'ny hoditra toy ny hoditra vita amin'ny synthetic Ity dia tsara ho an'ny fianarana ny fanaovana tombokavatsa ho an'ny mpanazatra ny tatoazy Azo ampiasaina ny ilany aoriana amin'ity hoditra sandoka ity. 20x15cm lanja: 50g Alamino ny fikoriananao - afaka misavoritaka tokoa ny ink. Ny fivoriana fanazaran-tena dia fomba tsara iray hahatakarana ny fomba fiasa amin'ny tatoazy. Amin'ny fampiroboroboana ny fahaizanao, dia hialanao ny fandoavana sy ny fanaparitahana ranomainty mandritra ny tatoazy voalohany. Ohatra, mety ho hitanao ny ...
Blank Fampiofanana maharitra makiazy maharitra 290 * 195 * 3MM mpanazatra momba ny tatoazy vita amin'ny silika matevina
1. Ampio hampiakatra haingana ny haavon'ny tatoazy ny mpiorina 2. Fitaovana synthetic, azo antoka, tsy misy akora manimba 3. Marefo, fahatsapana tena izy 4. Mety ho an'ny mpanakanto vao manomboka sy efa za-draharaha. 5. Manamora ny asan'ny mpanao tatoazy. Anarana: manao fanazaran-tena ara-nofo Fitaovana: silicone Toerana fitobiana: 290 * 195 * 3MM Lanja mavesatra: 0,22 kg Ny hoditra fanao amin'ny tatoazy tsara indrindra Taona vitsivitsy lasa izay, ireo mpanaingo tatoazy dia nanana safidy voafetra tokoa raha ny amin'ny fanazarana hoditra. Ny ankamaroany dia vita tamin'ny vita amin'ny rubber na plastika, ...
Fitaovam-piadiana miaraka amin'ny hoditra fanao amin'ny paozy vita amin'ny silika malefaka
1. Fitaovana: hoditra malefaka artifisialy 2. refy karazany 1: 20 * 20 * 3cm karazana 2: 15 * 15 * 3cm fonosana tafiditra ao: 1 x fanazaran-tena momba ny tatoazy 1 fanatsarana ny fahaizanao amin'ny hoditra fanazaran-tena momba ny tatoazy na dia ilay mpanaingo tatoazy matihanina tsara indrindra aza dia mianatra foana teknika vaovao ary manandrana manitatra ny fahaiza-manaony. Ny hoditra fanaon'ny tatoazy no fitaovana farany hampiasana fahaiza-mandanjalanja ary koa mamorona sombin-javatra azonao aseho amin'ny mpanjifa mety. Ny famolavolana ankehitriny dia misy fanasongadinana sarotra sy alokaloka izay ...
20 * 30 * 0.13cm volomaso fanaovana tazomina fanazaran-tena hoditra hatsaran-tarehy maharitra fikolokoloana tarehy volomaso eyebrow fampiofanana hoditra Microblading famatsiana hoditra
Fomba fanao amin'ny tatoazy hoditra fanatanjahan-tena kalitao *** fonosana: 1pcs *** Tany lemaka ho an'ny famolavolana sy ny fomba fanao tsy andoavam-bola, manaova teknika samihafa, manomboka amin'ny famaritana ka hatramin'ny alokaloka *** Vita amin'ny akora toy ny hoditra sentetika *** Avelao ianao hanatsara ny fahaiza-manao nefa tsy mampihatra amin'ny tena hoditra malefaka ary manana fahatsapana mitovy amin'ny hoditry ny olombelona, ​​matevina ho an'ny fampiasana roa sosona Function: Fampiharana tatoazy Size: 200 * 300 * 1.3mm lanja: 0.1kg fonosana: kitapo 1pc / opp Ahoana ny fomba fampiasana tsara ny hoditra fanaovana fanao amin'ny tatoazy Ao anaty ...
20 * 15 * 0.13cm volomaso fanaovana tazomina fanazaran-tena hoditra hatsaran-tarehy maharitra fikolokoloana tatoazy volom-bolo fanabeazana tatoazy Microblading famatsiana hoditra
Tattoo Practice hoditra fiofanana avo lenta amin'ny hoditra ho an'ny makiazy Endri-javatra: 1. Ampio ireo vao manomboka hampiakatra haingana ny haavon'ny tatoazy 2. Fitaovana synthetic, azo antoka, tsy misy akora manimba 3. Mora azo, fahatsapana tena izy 4. Mety ho an'ny mpanakanto vao manomboka sy efa za-draharaha. 5. Manamora ny asan'ny mpanao tatoazy. Famaritana: 1. Fitaovana: hoditra malefaka artifisialy 2. refy: 200 * 150 * 1.3MM 3. Lanjam-pandrefesana: 80g / PCS fonosana misy: 1x fanazarana tatoazy fanaovana hoditra amin'ny fanaovana tatoa hoditra - Torohevitra sy tombo-tsoa tsy azo ...